samedi, 18 mai 2019 10:35
Zimbabwe: Nesorina ny minisitry ny angovo noho ny delestazy lavareny
Delestazy efa ho lava ! Nesorin’ny filohan’i Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, omaly, ny minisitry ny angovo sy ny fampiroboroboana ny herinaratra, Joram Gumbo (hita eto amn’ny sary), noho ny «faharatsian’ny famatsiana herinaratra» manerana ny firenena.
Vao avy nanome alalana orinasa miisa 30 hamatsy herinaratra azo avy amin’ny herin’ny masoandro anefa ingahy minisitra talohan’io fandroahana azy io, ary mbola nikasa ny hiazo an’i Mozambika, firenena mpifanolobodirindrina amin’i Zimbabwe, hitady vonjy ka hifampiraharaha any an-toerana amin’ny famatsiana herinaratra an’i Zimbabwe.
Nilaza moa ny orinasam-panjakana misahana ny herineratra any Zimbabwe (ZETDC), fa hisy delestazy adin’ny valo isan’andro, noho ny fahanteran’ny milina mpihary herinaratra mandeha amin’ny arintany (charbon), izay mitarika fihenan’ny tolotra azo omena ny mpanjifa.
Nisy, ny 18 mey 2019, ny fidinana ifotony niarahan’ny solontenan'ny Ministeran'ny Angovo, sy ny Rano ary ny Akoranafo niaraka tamin'ny teknisianina avy ao amin'ny Jirama sy ny teknisianina tao amin'ny CGHV (Compagnie Générale d’Hydroélectricité de Volobe), nijerena ny toerana afaka hanorenana ny tohadrano lehibe izay mandrafitra io toby famokarana herinaratra vaovao ao Volobe, faritra Atsinanana.
Hamatsy 120 MW, izay afaka hisahana ny filan'ny tambazotran'Antananarivo sy Toamasina ny tobim-pamatsiana herinaratra vaovao izay haorina io.
Heverina ho vita amin'ny taona 2023 io foibe famokarana herinaratra ao Volobe io eo ka mponina eo amin'ny 2 tapitrisa eo no hisitraka izany.
samedi, 18 mai 2019 08:56
samedi, 18 mai 2019 08:55